Himalaya Dainik » तपाईको कुन राशि ? यी ४ राशिका हुन्छन् सबै भन्दा धेरै दुश्मन !
तपाईको कुन राशि ? यी ४ राशिका हुन्छन् सबै भन्दा धेरै दुश्मन !
भाग्यले साथ दिने यस राशि हुनेहरु सजिलै प्रगति गर्छन्। त्यति मात्र नभई सफल हुनको लागि दुखै गर्न पनि पछि हट्दैनन्। अलग सोच र प्रतिभाको कारण मेष राशि हुनेहरुलाई रिस गर्ने धेरै हुन्छन्। मेष राशि हुनेहरुले सफलतामा बाधा उत्पन्न गराउन खोज्ने देखि सचेत रहनु पर्ने हुन्छ।
जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नझुक्ने प्रवृतिको कारण यस राशि हुनेहरु हत्त-पत्त झुक्दैनन्। यहि कारणले गर्दै मकर राशि हुनेहरुका पनि धेरै दुश्मन हुन्छन्। कतै गलत भएको देख्न नसक्ने हुँदा पनि मकर राशिका दुश्मन धेरै हुन्छन्। तर मकर राशि हुनेहरु दुश्मनीको कारण विचल्लित भने कहिले हुँदैनन्।
यो पनि- धर्मशास्त्र : यी हुन् एकाबिहानै ‘ॐ’ उच्चारण गर्दा हुने फाइदा
ॐ उच्चारण गर्दा शरीरको पाचनक्रिया, मुटु र रक्तप्रवाहलाई पनि यसले राम्रो गर्छ ।
दम्पती मृत फेला : पतिको भन्दा १० घण्टापछि पत्‍नीको मृत्यु